Printing zvakarukwa nhanganyaya ayo basa - China Changzhou Plet Printing
Dots mune zvokudhinda kuridza basa rinokosha. Dots anogona uchatamisa gradations, zvese, uye mavara ari mufananidzo. Chero zvichiratidza kana transmissions dzine ruvara inoramba kana nezvimedu sirivha yokuumba kuramba vachiita inzwi. Izvi vachiita inzwi uye rukoko zvinofanira mifananidzo kana dzimwe nzira kuti chidimbu mufananidzo kupinda zvikuru nezviduku Dots.
Dots ndiwo inokosha chairema Graphics pamusoro mundiro, uye vane mutoro rinozvibereka ari pasi enyika yepakutanga, kwesangano akanyatsorongwa, uye pepa rehurukuro chifananidzo. Maererano nheyo pomumbure, rinogona rakakamurwa nezvemarudzi maviri amplitude-modulating zvakarukwa uye kakawanda-modulating Network. Aimbova rave richishandiswa nevakawanda. Kushandisa nzira dzakasiyana-siyana (magirazi sefa, kuonana sefa, uye zvemagetsi kuparadzana michina) anogona kuzadzisa ichi mhando nehoro, izvo zvinogona kushandiswa zvikuru nokuda kwayo nyore, nokutsanya, uye zvakanaka kuri zvabuda. Panguva iyoyo, vanhu aizivawo zvakajeka pokuperevedza ayo, akadai Mhedziso kubviswa Moire, saka pamwe kukura muzvigadzirwa yokudhinda, vanhu vakatanga kutendeuka pfungwa dzavo mumwe mhando samambure - FM Network nehoro.
Kakawanda vachisiyanisa inzwi kuongorora dzidziso zvakaberekwa kwenguva yakati. Mukutanga 1993, Agfa Division uye Linotype-Hero Corporation kushanda zvapamutemo ari FM zvakarukwa kuongorora michina. Muna August 1993, China Muvambi Beijing University yakatangawo yayo FM kuongorora michina.
FM rinovharidzira michina ndiwo mufananidzo iri tarisa uye chiyamuro, pashure kubudiswa, kuburikidza goho mudziyo kana zvakaenzana pfungwa dziri randomly akaparadzirwa dzezvimwe siyana, uwandu pfungwa uye arambe achirema, kureva kakawanda chitarisiko pomumbure pfungwa, mu kuti ataure mufananidzo Density uye akanyatsorongwa unyanzvi nzira. Naizvozvo, kuti fineness chifananidzo rinomiririra hakuchisina kutsanangurwa maererano nokuwanda vatema uye chena mitsetse neimwe sendimita, asi ari kunorondedzerwa ukuru Dots. The maduku ari dot saizi, dzakanga rakarurama mufananidzo kuti inogona kumiririrwa. The nani.
The zvemichina rinobereka mifananidzo kuti vari pedyo Photographic migumisiro. Nokuda yakasiyana nokufumurwa mumatunhu ari Photographic muitiro, pane kusiyana uwandu photosensitive sirivha munyu nezvimedu munzvimbo iyoyo. Mushure kukura, vashoma sirivha munyu nezvimedu panguva yakaderera arambe achirema pamusoro mufananidzo, uye pane zvakawanda sirivha munyu nezvimedu pamatunhu arambe achirema, uye arambe achirema shanduko iri pakutsvaga nhamba nesirivha munyu nezvimedu munharaunda dzakasiyana. Izvi zvakafanana FM network, uye amplitude of AM nzvimbo yakasiyana. Ivo inoratidzwa dot kukura (mu nhamba), saka havagoni vabudirire nezvaizoitwa pedyo mifananidzo.
Parizvino, makambani akasuma zvakasiyana dot zvivako uye akapiwa mazita akasiyana, akadai Agfa kuti "Crystal Network", Linotype-Hero kuti "Diamond Network", Dainippon Chinovhara kuti "RANDOT", etc. Saka nhamba uye nzvimbo Kudhinda Dots nomufananidzo mumwe nharaunda Unit zvakasiyana, asi zvose ndezvaJehovha FM kuongorora.
Pajira riya kukura FM kuongorora kunobva goho chisarudzo uye kuongorora parameters. Somuenzaniso, kana goho chisarudzo chiri 2400 DPI, uye rinovharidzira parameter ndiyo 2 × 2 Laser Dots sezvo nomumbure pfungwa, chidzitiro dhayamita ndiyo 21 μm; rinovharidzira parameters vari With 3 × 3 Laser Dots somunhu dot, kuti dot dhayamita 32 μm.
In yose muitiro, chinonyanya chinokosha ndiko yokutendeutsa uye kuchinja zviri FM Network. Chinoumba ndiko kusarudza zvakakodzera randomness uye Laser danda dhayamita. The richangobva vanowanika FM samambure pfungwa inotsvedzerera uye yakasimba, yunifomu kukura, uye vane yoga chiedza shoma makwapa, inova kiyi kudzora unhu. The itsva kugadzira mashoko okudhinda pasimbi muchina anogutsa zvinodiwa ichi. The Laser danda dhayamita zvinogona kugadziridzwa maererano dot kukura. Uyezve, kuti pamwe inotevera muitiro, kufunga vanofanira kubhadharwa kuti kusarudza dot pfuma, iyo inogona kazhinji kudzorwa mukati kuwanda 5%. Kuwedzera pane zviri pamusoro apa, mashoko mifananidzo iri mifananidzo zvinofanira kusukwa nzeve tembiricha, kukurumidza, uye ph tsika, uye vanofanira kusukwa kumusoro-nokukurumidza inopisa inoratidza kuti nechokwadi unhu pfungwa. Maererano yokudhinda, nokuti hakuna muganhu chidzitiro angled kakawanda vachisiyanisa inzwi, kururama michina overprinting iri nani pasi, uye ruvara inks anowanzoshandurwa kushandiswa zvakare zvinogamuchirika.